२०७२ साउन २३ मा पहिलो पटक संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दा प्रदेश ६ को स्वरुप अर्कै थियो । हालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम एउटै प्रदेश थियो । लगत्तै सुर्खेतका युवाको अगुवाईमा सुर्खेतबाट अखण्ड मध्यपश्चिमको आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनमा अन्य जिल्लाबाट बल थपियो । आन्दोलनले सुर्खेत…
कर्णालीको राजधानीलाई कसरी सफा बनाउने ? आफ्नो मत राख्नुहोस्
१० माघ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी घोषणा भएसंगै वीरेन्द्रनगर राम्रो बन्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । नगर झन् कुरुप बन्दै गएको छ । सडकहरु भत्किएका छन् जहाँतहीं प्लाष्टिक थुप्रिएका छन् । ढल निकासको उपयुक्त व्यवस्था नहुँदा फोहर पानी सडकमा बग्छ । अव्यवस्थित घर…
कर्णालीमा महिला हिंसा : यसरी हुन्छ न्युनिकरण
२३ मंसिर । महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सोमबार पन्ध्रौं दिन हो । यस विचमा अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय हुदै स्थानिय स्तरसम्म विभिन्न रचनात्मक गतिविधि मार्फत चेतनामुलक अभियानहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोत बाहेक अन्य सबै हिसाबमा पछाडी रहेको कर्णाली प्रदेश पनि…
कहिले निर्माण होला वीरेन्द्रनगरको बसपार्क ? किन भयो ढिलाई ?
१५ असोज । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नयाँ बसपार्क निर्माणको लागि २०७४ कात्र्तीक १० मा निर्माण गरीसक्ने गरी २०७३ असार १४ मा चाईना नर्रशिङ्ग जेवी कम्पनीले नगरपालिकासंग सम्झौता गरेको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालीकाका ईन्जिनियर बिशाल अधिकारीका अनुसार ६ करोड ८२ लाख ७५ हजार ८ सय ८७…
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापनको यस्तो छ तयारी
२४ भदौ । नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) र मानव अधिकार तथा ग्रामिण वातावरण संरक्षण केन्द्र (हुरेक) ले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, तयारी र युवाहरुलाई कसरी संलग्न गराउन सकिन्छ भनी जनप्रतिनिधि र मुख्य सरोकारवालाहरुलाई सोधेका थिए । सान्दर्भिक प्रश्न र उत्तरलाई…
परीक्षाका लागि मात्र हैन ज्ञानका लागि पढ्ने हो
२९ असार । एसइई परीक्षालाई सबैले महत्वका साथ हेर्दछन् । यसकै नतिजाको आधारमा विद्यार्थीले आफ्नो उच्च शिक्षाको बाटो तय गर्ने भएकाले पनि यसको बेग्ले महत्व छ । यसका साथै समाजमा यसले पार्ने प्रभाव पनि उच्च छ । र, अर्को कुरा हो एसइई राष्ट्रियस्तरको…
२ जेठ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा दिएर गत बर्ष बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यससंगै मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको हो । स्थानीय सरकार गठन भएको एक बर्षसम्म पनि जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन हुन सकेका छैनन् । …
एसइइ दिने विद्यार्थीलाई सुझाव : एक मिनेट पनि महत्वपूर्ण
८ चैत । विद्यालय शिक्षाको मुख्य गौंडो मानिने एसइइ परीक्षालाई विद्यार्थीहरुले विशेष महत्वका साथ हेर्छन् । २०७४ सालको एसइइ आजदेखि शुरु भएको छ । यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका केही विद्यालयका विद्यार्थीसंग सेरोफेरोले कुराकानी गरेको छ । सुर्खेतका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जीतबहादुर…
जनप्रतिनिधिका ५ प्रतिवद्धता, प्रतिस्पर्धीका ५ सुझाव
१३ पुस । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभामा सुर्खेतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका आगामि ५ बर्षका ५ योजना यस्ता छन् । निर्वाचनमा पराजित उनीहरुलाई निकटतम प्रतिस्पर्धीका ५ सुझाव जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ । धुर्वकुमार शाही, प्रतिनिधिसभा सदस्य क्षेत्र नं.१, सुर्खेतनेकपा एमाले (निर्वाचित)१. विद्युतिकरण गर्ने…